एन्ड्रोइडमा चक्र चार्ज गर्दै: तिनीहरू के हुन् र तपाईंको फोनमा कति जना छन् Androidsis
चक्र चार्ज गर्दै: तिनीहरू के हुन् र तपाईंको Android फोन कति छ?
ईडर फेरेनो | | ब्याट्री, ट्यूटोरियलहरू
ब्याट्री त्यस्तो चीज हो जुन प्रयोगकर्ताहरू एन्ड्रोइडमा निरन्तर चिन्ता गर्दछन्। त्यसकारण हामी यसको प्रयोग सुधार गर्नका लागि नियमित रूपमा विकल्पहरू खोज्छौं, जस्तै अनुकूलन Huawei फोनमा उपलब्ध छ। अर्को पक्ष पनि आवश्यक छ ब्याट्री स्थिति होकिनकि हामी जान्न चाहन्छौं कि यसले कुनै समस्या आएको छ भने, जुन हामीले लामो समयसम्म हुने क्षति वा समस्याहरूबाट बच्नको लागि हामीले सकेसम्म चाँडो यसको सामना गर्नुपर्नेछ।
एक पक्ष जुन हामीलाई एन्ड्रोइडमा यस सम्बन्धमा मद्दत गर्दछ चार्ज चक्र हो। तिनीहरुलाई धन्यबाद छ हामी कसरी अधिक ब्याट्री र यसको स्थिति को बारे मा जान्न सक्दछौं वा हामी यसको पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्न सक्षम हुन कति बेर पर्ख्न सक्छौं। प्रयोगकर्ताहरूको लागि महत्त्वपूर्ण जानकारीको एक टुक्रा।
1 चार्ज चक्र के हो
2 हामीसँग एन्ड्रोइडमा कति चार्ज चक्रहरू छन् भनेर जान्ने
चार्ज चक्र के हो
हामी यसको नामबाट अनुमान लगाउन सक्छौं, चार्ज चक्र एक प्रक्रिया हो जुन प्रत्येक पटक हाम्रो एन्ड्रोइड फोनको ब्याट्री प्रतिनिधित्व गर्दछ। पूर्ण लोड र अनलोड भएको छ। यद्यपि यो परिभाषा निर्मातामा निर्भर गर्दै अलिक भिन्न हुन सक्दछ। किनकी केही ब्रान्डहरु विचार गर्छन् कि यो एक चक्र होइन जबसम्म पूर्ण ब्याट्री प्रयोग गरी सकेको छैन। यद्यपि यो पुन: लोड नभएसम्म यो सधैं समान अवधिसम्म हुनु हुँदैन।
वर्तमानमा, सबैभन्दा सामान्य ब्याट्री लिथियम आयन ब्याट्री हो कि विचार गर्दै, चार्ज चक्र धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो भन्दा बढि महत्वपूर्ण छ यो बितिसकेको समय भन्दा यो निर्माण गरिएको थियो। किनकि यस्तो हुन सक्दछ कि ब्याट्रीहरू जुन चार्ज साइकलको अधिक संख्या हुन्छ पुरानो ब्याट्रीहरू भन्दा झन् खराब हुँदै जान्छ, तर त्यसले तिनीहरूको उपयोगी जीवनमा कम चक्रहरू पार गरिसकेको छ।
हालको एन्ड्रोइड फोनको मामलामा, यो अनुमान गरिएको छ कि ब्याट्रीहरूले सक्छन् लगभग 400०० चक्र चक्रको लागि अधिकतम प्रदर्शन दिनुहोस्। त्यसोभए यो त्यस्तो आकृति हो जुन हामीले यस अर्थमा सन्दर्भको रूपमा गर्नुपर्छ। होनि, यो फोनमा निर्भर हुन्छ। तर राम्रो छ कि त्यो अर्थमा एक मध्यम संदर्भ मान छ।
किन एन्ड्रोइड फोनले निष्क्रिय हुँदा धेरै ब्याट्री प्रयोग गर्दछ
हामीसँग एन्ड्रोइडमा कति चार्ज चक्रहरू छन् भनेर जान्ने
एन्ड्रोइडमा हामीसँग नेटिभ फंक्शन छैन जसले हामीलाई फोनको चार्ज चक्र बताउँछ। दुर्भाग्यवस यो सम्भव छैन, र यस्तो देखिदैन कि भविष्यमा गुगलले यस्तो सुविधा प्रयोग गर्ने छ। यो गर्नका लागि हामीले केही अनुप्रयोगहरूको सहारा लिनु पर्छ। गुगल प्लेमा हामी यस सम्बन्धमा केहि विकल्पहरू फेला पार्दछौं जसले हामीलाई कुनै समस्या बिना नै हाम्रो फोनको चार्ज चक्रमा नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ।
सम्भवतः सबैभन्दा उत्तम मध्ये एक चार्ज साइकल ब्याट्री स्थिति हो। यो एक अनुप्रयोग हो जुन हामी एन्ड्रोइडमा नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्दछौं। यसको लागि धन्यबाद, हामी फोनमा चार्जिंग साइकल मापन गर्न सक्दछौं। अर्को पटक हामी फोन चार्ज गर्न जान्छौं, र एक पूर्ण चार्ज चक्र गरिन्छ, एक सूचक गृह स्क्रिनमा प्रदर्शित हुनेछ। थप रूपमा, अनुप्रयोगले ग्राफ पनि प्रदर्शन गर्दछ जुन बाँकी ब्याट्री चक्रको संख्या अनुमान गरिएको छ। तिनीहरूले हामीलाई अन्य तथ्या .्कहरू पनि प्रदान गर्छन्, जुन रुचि र प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयोगी हुन सक्छ। ताकि तिनीहरूले भने ब्याट्री को स्वास्थ्य स्थिति को निगरानी गर्न सक्छन्। तपाईं यो लिंकमा अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ:
चक्र ब्याट्री तथ्या .्क
विकासकर्ता: सेरेब्रम विकास
यो एक धेरै उपयोगी अनुप्रयोग हो, यद्यपि यसमा महत्त्वपूर्ण सीमा छ। अनुप्रयोग मात्र चार्ज चक्र मापन गर्न सक्षम हुनेछ जुनसुकै हाममा हामीले यो हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा स्थापना गर्यौं। थप रूपमा, जब हामी फोनलाई चार्जरमा जडान गर्छौं, यो जहिले पनि सक्रिय हुनुपर्दछ, अन्यथा भनिएको चक्र रेकर्ड गर्न सम्भव छैन। त्यसोभए यदि तपाईंसँग नयाँ फोन छ भने, सुरुबाटै यो स्थापना गर्न चासो लाग्न सक्छ, धेरै अन्य अनुप्रयोगहरू जस्तै। तर यो एक उत्तम विकल्प हो जुन हामी यस फाँटमा प्रयोग गर्न सक्दछौं, अपरेटिंग सिस्टममा नै सीमितताहरू ध्यानमा राख्दै।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » ट्यूटोरियलहरू » ब्याट्री » चक्र चार्ज गर्दै: तिनीहरू के हुन् र तपाईंको Android फोन कति छ?
फेसबुकले प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचनाहरू असक्षम गर्न अनुमति दिनेछ
केही अमेरिकी कम्पनीहरूले Huawei लाई कम्पोनेन्ट आपूर्ति गर्न पुनः सुरु गर्यो